Maalinta dhalinyarada aduunka oo laga xusay Garoowe iyo Tahriibta ba?an oo laga digay (Dhegeyso) – Radio Daljir
Maalinta dhalinyarada aduunka oo laga xusay Garoowe iyo Tahriibta ba?an oo laga digay (Dhegeyso)
Agoosto 12, 2013 10:33 b 0
Garoowe, Aug 12, 2013 – Dowladda Puntland ayaa maanta xus balaaran u smaysay dhalinta deeganadan, xili ay ku beegnayd 12 bisha Agoust oo ah maalinta dhalinyada aduunka, isla markaasna sanad kasta laga xuso caalamka oo idil.
Munaasabada lagu maamusayey maalinta oo lagu dhigay dhismaha hoolka Baarlamanka Puntland waxaa goob joog ka ahaa dhalinyaro fara badan oo kala kala socday gobollada kala duwan ee Puntland, marka laga reebo gobolka cusub ee Guardafu.
Tahriibka dhalinyarada ee deeganada Puntland ayaa si xowli ah ku socda, waxaana xuska maalinta dhalinyarada aduunka ay ku soo beegantay maanta, xili ay socdaan wel wel ay waalidiin badan ka qabaan khatarta tahriibta.
Madax kala gedisan oo kulanka joogay ayaa jeediyey hadalo qiiro leh oo khuseeya dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, waxaana lagu micneeyey dhibaatooyinka wakhtigan taagan ee tahriibka in ay sabab u yihiin dhiiri-gelin la?aan haysata dhalinta.
Qul-qulka ugu badan ayaa la sheegay in ay sababto iyadoo aan dhalintu helin dhiiri-gelin dhanka shaqada iyo maamulka, waxaa la sheegay hadii sidaan ay ku sii socoto xaaladu in ay mustaqbalka dhow dhalinyarada laga weyn doono gobolka oo dhan.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle oo kulanka hadal ka jeediyey waxuu ku dhawaaqay in sanadkaan ay jirto masiibo qaran oo ka taagan Puntland, maadama dhalintii wax baratay iyo kuwii kaleba ay ka carareen dalka iyagoo raadsanaya nolol ka wacan tan dhulkooda.
Madaxweyne ku xigeenka Dowlada Puntland Cabdisamad Cali shire oo ka qeyb galay munaasabada ayaa ku baaqay in loo istaago shacab iyo dowladba, sidii loo joojin lahaa aafaada Tahriibta dhalinyarada Puntland.
Wararka la xariira Tahriibka ee deeganada Puntland ayaa ah kuwa aad u sii kordhaya, waxaa dhowaan la shaaciyey in sanadkan ay gobolka nugaal ka tahriibeen in ka badan 720 dhalinyaro ah, kuwaasi oo ka cararay dhulkooda isla markaasna maray badda u dhexeya Liibiya iyo Talyaaniga.
Dhegeyso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntalnd Cabdiweli Xirsi Cabdulle oo ka hadlay goobta
G/ degmada Tawfiiq ee Mudug oo Puntland ugu baaqay in adeegyada nolasha laga taageero (Dhagayso)
Prof. Geedi oo Dowladda Federaalka ah ku eedeyey in ay siyaasad qaldan ku maamulayso dalka